भारतको विदेशमन्त्री जयशंकर बनेपछि नेपाल–भारत सम्बन्ध बारे यसो भन्छन् विज्ञ
Wed, May 27, 2020 at 10:56pm
शनिबार, १८ जेष्ठ २०७६,	आहाखबर	1.64K
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथग्रहण समारोहमा बिहीबार एक परिचित, तर गैर–राजनीतिक अनुहार देखा परे । धेरै आश्चर्यचकित हुने गरी पूर्वविदेशसचिव डा. सुब्रमण्यम जयशंकरले १४औँ वरीयताको मन्त्रीको शपथ लिए ।
जयशंकरले चाहेको कुरा लागू हुने होइन, प्रधानमन्त्री मोदीले चाहेको नीति जयशंकरले कार्यान्वयन गर्ने हो, आधारभूत रूपमा नेपाल–भारत सम्बन्ध कोही आउँदा वा जाँदा प्रभावित हुँदैन ।
शुक्रबार जयशंकरलाई विदेशमन्त्री तोकिएपछि मोदी सरकारको छिमेक प्रथम नीति र विशेषगरी नेपाल–भारत सम्बन्धमा उनको व्यक्तित्वले पार्ने प्रभावबारे बहस सुरु भएको समाचार नयाँ पत्रिकाले छापेको छ ।
संविधान निर्माणको आखिरीमा १–२ असोज ०७२ मा मोदीका विशेष दूतका रूपमा नेपाल आउँदा जयशंकरले संविधान जारी गर्ने मिति दुई साता धकेलेर सर्वसम्मत कायम गर्ने मोदीको सन्देश सुनाएका थिए । मोदीको सन्देश भन्दै जयशंकरले प्रस्तुत गरेको भाषाशैली र संविधान जारी भएपछिको भारतीय प्रतिक्रियापछि उनको नकारात्मक छवि नेपालमा चित्रित भयो । भारतले नेपालमा लगाएको नाकाबन्दीको डिजाइनरका रूपमा समेत उनको चर्चा भयो ।
‘जयशंकरजीलाई अनुदार भनियो, तर यथार्थमा उनी प्रधानमन्त्री मोदीको सन्देश लिएर गएका थिए । त्यसपछि भएका नाकाबन्दीलगायत घटनाक्रमको जननी जयशंकर मात्रै होइनन्,’ एकजना पूर्वभारतीय कुटनीतिज्ञले दिल्लीबाट टेलिफोनमा भने ।
राजनीतिक नेतृत्वको लामो पहलकदमीमा नेपाल–भारत सम्बन्ध सुमधुर भएको छ । जानकारहरूका अनुसार यो सम्बन्ध सुधारमा जयशंकरको प्रयास उल्लेखनीय थियो । भारतका लागि पूर्वराजदूत डा. लोकराज बरालले विदेशमन्त्री एस जयशंकरले विगतमा मोदीको नीति कार्यान्वयन गरेको र अब पनि त्यही गर्ने बताए । ‘जयशंकरले चाहेको कुरा लागू हुने होइन, प्रधानमन्त्री मोदीले चाहेको नीति जयशंकरले कार्यान्वयन गर्ने हो,’ बरालले भने, ‘आधारभूत रूपमा नेपाल–भारत सम्बन्ध कोही आउँदा वा जाँदा प्रभावित हुँदैन ।’
भविष्यमा मुखर भएर आउनेछन् : डा. दिनेश भट्टराई, पूर्वराजदूत
भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरलाई सीधा अगाडि चल्ने व्यक्तिका रूपमा मैले बुझेको छु । उनी छिमेक र विशेषतः नेपाल मामिलामा अलिकति मुखर छन् । जयशंकरले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित नेपालका नेताहरूलाई नजिकबाट बुझेका छन्, चिनेका छन् । छिमेकमा मोदीले लिने रणनीतिक निर्णयहरूमा जयशंकरको हात देखिने नै छ । जयशंकरमा अमेरिका र चीनसँग सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्न सक्ने खुबी देखिन्छ । अमेरिकासँग सिभिल न्युक्लियर डिल गर्ने महŒवपूर्ण पात्र जयशंकर नै थिए । जयशंकर आउँदा वा नआउँदा भारतको नेपाल नीति प्रभावित हुने होइन । विदेश नीति कार्यान्वयनकर्ता मात्रै फेरिएका हुन्, कार्यान्वयनको आयाम परिवर्तन हुन सक्छ । समग्र विदेश नीति वा छिमेक नीति नै फेरिने भन्ने हुँदैन । तर, मोदी सरकारले कस्तो नीति अपनाउने हो भन्ने बुझ्न एकाध महिना पर्खिनुपर्छ । उनको मालदिभ्समा हुने भ्रमणले पनि सन्देश प्रवाह गर्ने सम्भावना म देख्छु । हामीले आफ्नो हित प्रवद्र्धन गर्न चनाखो भएर बस्नुपर्छ ।
नेपाल–भारत सम्बन्ध समस्यामा जाँदैन : डा. निहार नायक, नेपाल–भारत सम्बन्धका जानकार
विदेशमन्त्रीका रूपमा जयशंकरको भूमिका विदेश नीति र छिमेक प्रथम नीति कार्यान्वयन गर्नेमा हुनेछ । विजय केशव गोखले विदेशसचिव भएपछि सुधारिएको छिमेक सम्बन्धको जगमा जयशंकर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था म देख्छु । तर, नेपाल–भारत सम्बन्ध समस्यामा जाँदैन । नेपाल नीतिमा भारतले मूलभूत परिवर्तन ल्याउने सम्भावना छैन । विदेशसचिव र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारले छिमेक नीति सम्हाल्ने हुनाले विदेशमन्त्री यसमा धेरै इन्गेज्ड हुने सम्भावना हुँदैन । वास्तवमा विदेशसचिव गोखलेको प्रयत्नबाट नेपाल–भारत सम्बन्ध थप सुमधुर भएको छ ।
सधैँ मोदीको विशेष महत्वमा जयशंकर
अमेरिकाका लागि राजदूत रहेका वेला डा. जयशंकरलाई प्रधानमन्त्री मोदीको विशेष रुचिमा दिल्ली डाकियो र विदेशसचिवको जिम्मा दिइयो । तत्कालीन विदेशसचिव सुजाता सिंहले कार्यकाल नसकिँदै जयशंकरका लागि स्थान खाली गर्नुपर्‍यो ।
यति मात्र होइन, समयावधि सकिएका विदेशसचिव जयशंकरको कार्यावधि एक वर्ष थपेर मोदीले विशेष महत्वव दर्साए । विजयकेशव गोखलेलाई पदभार बुझाएपछि जयशंकर टाटा गु्रपका जागिरे भए । दिल्लीमा केही महिनाअघि भएको रायसिना डायलगमा जयशंकर टाटा ग्रुपका तर्फबाट सहभागी थिए, जहाँ परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपाल–भारत सम्बन्धबारे सम्बोधन गरेका थिए ।
जयशंकरका पिता के सुब्रमण्यम भारतका पूर्वकूटनीतिज्ञ थिए । उनी रक्षा मन्त्रालयसम्बद्ध आइडिएसएका संस्थापक महानिर्देशक थिए । करिअर डिप्लोम्याटमध्ये मन्त्री हुनेहरूमा अहिलेसम्म के नटवर सिंह र उनी हुन् । नटवर सिंहलाई भारतीय कंग्रेसले प्रवद्र्धन गरेको थियो । पूर्वकूटनीतिज्ञ हरदीपसिंह पुरी पनि मोदी सरकारको मन्त्रिपरिषद्मा राज्यमन्त्री छन् । पूर्वसेनाप्रमुख भिके सिंह र पुरी यसअघि पनि राज्यमन्त्री थिए, अहिले पनि राज्यमन्त्री छन् । पूर्वविदेशसचिव जयशंकरले पूर्णमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन्, तर उनी सांसद छैनन् । उनले भाजपामा प्रवेश गरेको औपचारिक घोषणा पनि गरेका छैनन् । जानकारहरूका अनुसार चीन बुझेका र अमेरिकामैत्री छवि बनाएका जयशंकर र चीन बुझेका विदेशसचिव विजयकेशव गोखलेबीचको कूटनीतिक रसायनले भारतको विदेश नीति सञ्चालन गर्नेछ ।